Qare - Howling Pixel
Kani waa maqaal ku saabsan "Barandhaha". Isticmaal kale fiiri Barandhe (isticmaal kale)Barandho, Baradhe, Bataatis (Af-Carabi: البطاطس Af-Taliyaani: patata Af-Ingiriis: potato) waa midho ka mid ah khudaarta oo ka baxa dhirta xididadeeda. Barandhadu waxay ka mid tahay cuntooyinka dadka iyo xooluhu quutaan. Inta la ogyahay waxaa jira dhowr nooc oo barandho ah kuwaasi oo ku kala duwan midabka, dhadhanka, xajmiga iyo qarada. Jaada ugu caansan ee dunida inta ugu badan laga helo waa barandhaha cadaan-huruud (yellow-white) qolof fudud leh. Barandhuhu waa cuntada afaraad ee dunida, waxa ka horeeya bariiska, qamadiga iyo galleyda oo kali ah.
Sida ay xuseen khubarada cilmibaadhista dhirtu, baradhadu waxay asal ahaan ka soo jeedaa dhulka hoose ee wadanada Koonfurta Ameerika, gaar ahaan Chile. In kastoo isbedel xaga jiiniska (genes) lagu sameeyay barandhaha, hadana 99% barandhaha caalamka laga isticmaalo waa mid ka soo jeedaa deegaanadaasi Koonfurta Ameerika.
Dagmada Cadakibir waxey ka tir san tahay gobolka Galgaduud, waxey 70km dhanka bari kaga beegan tahay dagmada Cadaado ee xarunta maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb. Cadakibir waxaa labineeyay 1980. 1985 waxaa laga qoday ceel biyoodkii ee ugu horeeyay.
Cadakibir waxey ka tirsantahay maamulka Ximan iyo Xeeb. Cadakibir waa magaalo ciid gaduudan kuna wanaagsan dhul beereedka; waxyaabaha lagu beero waqtiga xili roobaadka waxaa ka mid ah: qare iyo digir. Magaaladu waxay leedahay school hoose dhexe iyo isbitaal MCH ah iyo garoomada kubada cagta, waxeyna leedahay koox cubada cagta ah oo ka qeyb gasha tartanka ciyaaraha ee dagmooyinka maamulka Ximan iyo Xeeb.
Tuulooyinka hoostaga dagmada Cadakibir waxaa ka mid ah :
7. Gubata dheer
9. Quuri koox
10. Shilan wayne
12. Laan mareer
15 sadax barin
Waxaaidiin diyaariyey qoraalkaan MAXAMUUD CALI CABDI (FIIDHACYO)
'Camaaro waa dagmo ku taal gobolka Mudug waxay ku dhawdahay magalada xarardhere waxay ujirta 80 kiilo mitir waxa badeecada looga keenaa magalada galkacyo waxayna hoos tagta mamulka galmudug waxaana daga beesha Saleeban ee Habargidir’.
magaalada Camaaro ayaa ah magaalo aad u qaboow cimilo ahaan waxaana
kabaxa qudarta qeybaheeda kala duwan sida "Yaanyada,basasha,baradhada,mooska,cambaha,liinta, ................
Cidlo maahan dunidani ceyn kastoy tahaye
Ceyshkana intuu Caadil qoraa laga cunaa yaahe
Camaarana ninkii caga dhigaa wuu cajabayaaye
waxyaabey ku caantahay hadaan ceynkamida sheego
Ciideeda udugaa caafimaad weeyaane
Ceebna malahan qudaar nuuc walbaad ku cabireysaaye
Canbe moos iyo qare kaad beertana waad kacuneysaaye
Cajab weeye casirkii ceelaad qodaad biyo kala caraabee e
Taariikh ahaan, dadku waxay midhaha liinta aqoon u lahaayeen tan iyo qarniyaal badan. Sida lagu cadeeyay qoraal la helay wakhti dhowayd, dadka Shiinaha waxay isticmaali jireen khudaarta liinta ilaa 314 sano Ciise Hortii Beerashada geedka liintu wuxuu aad u batay sanadkii 1987kii taasi oo la sheegay in uu labo-laabmey beerida iyo soo saarka liintu, taasi oo iyadna ku salaysneed kordhitaanka suuqa liinta caalamka. Orange trees are widely grown in tropical and subtropical climates for their sweet fruit. The fruit of the orange tree can be eaten fresh, or processed for its juice or fragrant peel.Warbixin ay Hay'ada Cuntada Aduunku soo saartey sanadkii 2012ka Liin Macaantu waxay ahayd 70% dhamaan liinta caalamka la soo saaro. Wadanada caalamku waxay soo saareeyn ilaa 71.4 milyan oo liin ah sanadkii 2013ka, taasi oo wadanka Baraasiil ahaa midka koowaad, wadanka Maraykanka ayaa ku noqdey wadanka labaad ee ugu soo saarka badan liinta aduunka, gaar ahaan gobolka Florida iyo Kalifornia ayaa ugu batay beerida iyo soo saarka.
Liinta biyaheedu aad ayay u macaan yihiin, oo waxa ka dhamama sonkor iyo xoogaa dhanaan ah, waxaanay qani ku tahay fiitamiin sii (vitamin c) jidhka dadku u baahan yahay.
Reexaan (Af-Carabi: ريحان Af-Ingiriis: Basil) waa jaad ka mida dhir uduga cuntada lagu carfiyo, saliideeda waxaa laga sameeyaa catarka iyo noocyo ka mida cabitaanka
Sh. Axmed Wacdiyow
Sheekh Axmed Sheekh Abiikar Xasan Sh. Axmed Wacdiyow / Gabyow allaha y raxmadee waxa uu (ku dhashay Cadale) waa nin caalim ah oo diinta Islaamka wax ka yaqaan, waxaa kaloo uu ahaa gabayaa tiriya gabayga nooca loo yaqaan masafada.
waxaana Gabayadiisa ka mid ah:-
Sidii rasuul rabi nooma soo dirin.
Hadaad ruux la dagaasho kaa rooooooon
Ragoow hadoo qalbi waa la rafaadaa.
Kani waa maqaal ku saabsan Besbaaska Shiidan. Bogag kale fiiri Basbaas.
Shigni waa basbaas shiidan (ridqan) oo lagu darsado cuntada.
Shigniga ama basbaaska shiidan waxaa laga isticmaalaa dhamaan dunida, in kastoo lagu kala duwan yahay qaabka loo sameeyo. Tusaale ahaan, dadka Soomaalida ah waxay inta badan ka sameeyaan basbaas, basal, tamaandho, liin dhanaan iyo mararka qaar oo lagu daro toon. Wadanada Maraykanka iyo Yurub waxaa caan ka ah "Shigniga Macaan" kaasi oo ah iskudarka basbaas, basal iyo geedo kale oo macaaneeya.
Guud ahaan, shigniga waxaa loo isticmaalaa in uu cuntada dhadhan fiican u sameeyo, wuxuuna ka kooban yahay in ka badan 50% basbaas.